IHobby Carbon CNC Technology Co, Ltd ngumenzi oqeqeshiweyo weemveliso zeCFRP kunye nezixhobo , ezokufumana indawo kwiSixhen City, kwiPhondo leGuangdong apho kufutshane neHongkong. Iimveliso zethu zigubungela uluhlu olubanzi lweendlela, kubandakanya i-GFRP (iplasser eyomeleleyo yeflashini), i-CFRP (i-polymer eqinisiweyo ye-Carbon) kunye ne-KFRP (i-Kevlar-fiber-solid-solid polymer) amashiti, iibhloko ezisongelweyo, iibhloko, iiprofayili ezinzima. kunye ne 3D imbonakalo yecarbon fiber, zonke kwiintlobo ezinkulu zobukhulu. Ngaphandle koko, izixhobo ezahlukeneyo ziyafumaneka ngokunjalo, ezifana nezikere, amantongomane, iiashers, ii-standoffs, izixhobo ezenziwe ngesiqhelo, njl .njl.
Imigaqo yenkampani yethu igcina ikhredithi ngokusekelwe kwimfihlo kunye nomgangatho, ukuxhasa abathengi kwangaphambili kunye nenkonzo ephezulu. Ukuba ufuna, singasayina isivumelwano se-NDA sentsebenziswano engcono.Ukujonga ezi, uninzi lwabathengi bethu bangamashishini okuthengisa. Siyakwamkela ngokufudumeleyo uthethwano lwakho. Uya kwaneliseka ngokupheleleyo ziimveliso zethu ezisemgangathweni ngamaxabiso afanelekileyo, kunye nenkonzo enyanisekileyo. Sijonge phambili ekusebenzisaneni kunye nani ukuze nizuze inzuzo apha.
Imveliso / iNkonzo : Amaphepha e-Carbon Fibre , Iithabhula zeCarbon Fibes , Ukusikwa kweCarbon Ford CNC , IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC , Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam , I-Titanium Fasteners
Inkunzi (iMillion US $) : 1000,000
Unyaka owasungulwa : 2015
Sekiso : ISO9001
Idilesi yeNkampani : 3rd floor, 108#, Zhangbei Road, Longcheng Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China
I-Annual Sales Volume (i-Million US $) : US$1 Million - US$2.5 Million
Umqulu wonyaka wokuthenga (i-Million US $) : US$1 Million - US$2.5 Million
IMakethe : Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide
Uhlobo lweZiko (iSq.meters) :Below 1,000 square meters
Indawo yendawo :3rd floor, 108#, Zhangbei Road, Longcheng Street, Longgang,Shenzhen,China